आजको नेपाल बन्दमा कुन ठाउँमा कस्तो छ असर ? यस्तो छ देशभरको नयाँ (अपडेट) – Sandesh Press
आजको नेपाल बन्दमा कुन ठाउँमा कस्तो छ असर ? यस्तो छ देशभरको नयाँ (अपडेट)
November 16, 2021 105
काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको प्र’भाव देशभर परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको वि’रोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ब’न्दको आह्वान गरेको हो।
Prevफेसबुकमा भिडियो लाइभ गरेर युवतीले यसरी फा’लि’न् आफ्नै ज्या’न
Nextनेपाल बन्दको असर काठमाडौं उपत्यकामा परेन, सवारीसाधनहरु चल्न थाले